News - Faa'iidooyinka ultrasonic xijaab
Ultrasonic waa nooc ka mid ah mowjad farsamo, kaas oo ka kooban nidaam koronto iyo nidaamka gariirka ultrasonic. Waa tamar farsamaysan oo isweydaarsiga soo noqnoqota, awoodda sare, taas oo ay ka baxdo awoodda wadista. Iyo xuduudaha isku midka ah iyo sidoo kale qaybta aasaasiga ah waa barta ugu muhiimsan ee tiknoolajiyada ultrasonic.
Soosaaraha dijitaalka dijital ah ee soo saaraha dijitaalka ah ultrasonic Soo-saare (Soo-saare mawjada ultrasound) → Xiinka Xiinka (Xiisaha weyn) ultrasonic Madaxa Qaab (U gudbi ultrasound)
Faa'iidooyinka iyo qasaaraha ka sameynta caaryadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ultrasonic, waxaan soo bandhigeynaa falanqeeye xannibista horumarsan, falanqeeyaha muuqaalka caaryada, iyada oo loo marayo baaritaanka saxda ah ee caaryada soo noqnoqota iyo falanqaynta mowjadda caaryada ee qalabkan. Awoodda ultrasonic.oo yaree dhaawaca soo noqnoqda sababtoo ah soo noqnoqoshada aan la jaan qaadi karin mashiinka, maxaa intaa dheer, cimri dheeree mashiinka iyo caaryada.
Noocyada shaabadaynta tuubbada caaga ah, waxay leeyihiin nooc shaabadeed oo kala duwan, waxaa lagugula talinayaa inay kuxirantahay shuruudaha macaamiisha kaladuwan.
Iyada oo lagu xiro Xiinka Xiinka aagga gudaha ee tuubada ayaa lagu kululeeyaa khilaaf soo noqnoqda oo sarreeya oo ay soo saarto geeska ultrasonic. Tuubbada ayaa markaa lagu xirayaa daboolka oo la qaboojiyaa si loo sameeyo shaabadda tubbada.
Khatimidii Xiinka waxyeello uma geysan doono waxyaabaha gudaha ku jira oo dahaadhkuna wuu ka xasilloon yahay oo deggan yahay. Haddii aad u baahan tahay natiijo tayo sare leh oo xasiloon oo xasilan, nooca wax lagu xiro Xiinka ayaa si weyn loo soo jeediyay.
Haddii aad leedahay dhexroor tuubbo kala duwan, mashiinka wax lagu xiro Xiinka oo keliya wuxuu u baahan yahay inuu beddelo tuubbada haysta oo uma baahnid inuu beddelo qaybaha kuleylka, kharashka iyo waqtiga loo baahan yahay ayaa aad uga yar.
Dhanka kale, tan iyo markii xirashada ultrasonic ay tahay shaabad qabow, uma baahnid qalab wax soo saar si aad ula shaqeyso. Kaydinta dhulka iyo biilka korantada labadaba.
Marka ku soo dhawow inaad la xiriirto HX Mashiinka hadda, alaab-qeybiyahaaga mashiinka baako-hal-joog oo aan kuu caawinno!